Wacishe waliyeka ibhola uModise ngenxa yezinkinga kwiPirates - Impempe
Wacishe waliyeka ibhola uModise ngenxa yezinkinga kwiPirates
April 17, 2021 Impempe.com
UTeko Modise esakwi-Orlando Pirates
Owayeyisethenjwa somdlali kwi-Orlando Pirates, uTeko Modise useveze ukuthi washiya kuleli qembu ngoba kungasemnandi, engasakuthokozeli nokudlala esefisa ngisho ukuliyeka ibhola.
Ukuhamba kukaModise kwiPirates eya kwiSundowns kwathusa abaningi kwazise kwakungalindelekile.
“Ngashiya iPirates ngaya kwiSundowns ngoba izinhlangothi zombili (iPirates naye) zazingaseneme. Okwangikhubaza kakhulu emoyeni kwaba wukungaphumeleli kwemizamo yokuyodlala phesheya,” usho kanje uModise ekhuluma neSAfm ngoLwesihlanu kusihlwa.
“Ngalimala kakhulu emoyeni ngenxa yendlela olwaphathwa ngayo udaba lwami lokufuna ukuya phesheya. Ngangisajabule neze. Ngase ngiphelelwa nawuthando lwebhola…”
UTeko Modise esakwiMamelodi Sundowns
Ukuya kwiMasandawana kwamsiza njengoba abuyela efomini yakhe waphinde waba yisihlabani futhi, ewola izicoco ngaphansi kukaPitso Mosimane.
“Ukuya kwiSundowns kwaba nomphumela omuhle ngoba ngawina iChampions League, iligi yakuleli nezinye izicoco,” kulanda yena.
“Ngiyakhumbula ngishaya igoli sibhekene neSuperSport (United) okuyilo elasiwinisa iligi. Abadlali beSundowns bagijima bonke beza kimi, babejabule ngoba ngase ngizowina iligi okokuqala ngqa. Yingakho beyohlala bengumndeni kimi.
“Ngikhumbula kahle ngesikhathi sekhefu, nganginokwesaba ukuthi ngizophinde ngishwebe isicoco seligi. Ngangizitshela ngaphakathi ukuthi ngeke kungiphinde lokho.
“UPitso akazange asho lutho ngesikhathi sekhefu. Kwaba ngu(Alex) Barnes Bapela owafika wazosikhuthaza, okwasisebenzela kakhulu,” kusho uModise osengumhlaziyi kwiSuperSport TV.
Uthe yize bawina iMTN8 ngesikhathi ekwiPirates, leso sicoco akawuvali ngoba akazange ayothole indondo yaso, kodwa akangachaza ukuthi kwenzeka kanjani lokho.
UModise ubeke amakhokho ethala esedlala kwiCape Town City eneminyaka engu-36 ngoJulayi ka-2019, kanti uthi kukhona ababemnxenxa ukuthi aqhubeke okungenani omunye unyaka.
“Ngisho imenenja yami yayithi angiqhubeke kodwa umzimba wami wawusuqalile ujungihlebela ukuthi asiyeke manje. Ngangisalulami ngokushesha ngendlela efanele ekukhathaleni ngemuva kwemidlalo,” kuchaza uModise oseneminyaka engu-38 manje.
Uthe ukungena ekuhlaziyeni kwaba lula kakhulu ngoba wayevele ekujwayele kwazise uMosimane waqala ukubahlaziyisa besendawonye kwiSuperSport kanti waqhubeka lapho nakwiSundowns.
Kuke kwavela ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ukuthi usihlalo wePirates, u-Irvin Khoza uke wazama ukumnxenxa ukuba azoba yingxenye yethimba labaqeqeshi kodwa wenqaba ekhala ngokuthi kusekuningi asakwenza engxenye okuzothikamezeka uma esenomsebenzi omdinga nsuku zonke.
Previous Previous post: ‘Yimina engafaka uBenni Osuthwini,’ kusho uMngqithi
Next Next post: Iyasinyonyobela isicoco iStars, iRich Boyz iyadunguzela